Microsoft na-ghọtara dị ka otu n'ime ike na ahịa na-agba mbọ software ụlọ ọrụ. Ọ mgbe ulo oru na omume na-eme ka ala na mma ka ya ọrụ. Iji anọ n'ọnụ na ụwa, ime ozi ederede na-eduzi video ma ọ bụ ọdịyo oku, Microsoft ka e ya ezigbo ukara ngwa a maara dị ka Skype maka ya gam akporo ọrụ.
Skype ngwa Download
skype lite ngwa
skype maka android mbadamba
download skype ngwa
Dị ka nnyocha e mere, karịrị 250 nde ọrụ na-eji Skype dị ka ngwá ọrụ maka ha nkwurịta okwu. Na ọnụ ọgụgụ nke ndị ọrụ na-amụba na onye ọ bụla na-agafe n'ụbọchị ruru ya oru oma arụmọrụ. Nke a ngwa site Microsoft-enyere gị aka Diisk na ihe ọ bụla nke ọrụ iji Skype. Ị dị nnọọ mkpa a ọma njikọ Ịntanetị ma ọ bụ a cellular data ịbanye n'ụwa nke interactions nke Skype.
Your android ntị ike ka ị na-agwa onye ọ bụla ị chọrọ ma na-enyemaka nke Skype, ị nwere ike nakwa video mmekọrịta ndị ọrụ ndị ọzọ. Nke a pụrụ iche ngwa bụ a-agbanwe mgbakwunye maka gam akporo ọrụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ zuru ndu nke Skype maka gam akporo ọrụ, ya usoro na ojiji, ya ịrịba ama atụmatụ na mpi onu mgbe na-agụ nke a na-enye aka isiokwu.
Nbudata Skype maka gam akporo
I nwere ike effortlessly nweta a ọwọrọiso Skype ngwa gị android ngwaọrụ site na-eso dị mfe nzọụkwụ
Gaa na-egwu ụlọ ahịa na gị android ngwaọrụ na search maka Skype ma ọ bụ download site na njikọ nyere EBE A.
Pịa na wụnye button maka nbudata na echichi nke Skype.
Ozugbo ị rụnyere gị ngwa, ugbu a pịa ma na- aha na ngwa
Ị na-achọrọ tinye email akaụntụ na paswọọdụ.
Ị nwere ike iji ẹdude akaụntụ ma ọ bụrụ na ị na-adịghị mgbe ị na-eme a ọhụrụ.
họrọ Skype aha, nke na-eji dị ka gị Skype ID na-amalite na-akpọ.
1 Skype Nbanye Interface:
1.1 Tinye Ndi ana-akpo & mee Call
1.2 Akụkụ nke Skype:
1.3 High-Quality Video & Audio Oku:
1.4 Screen Ịkekọrịta na Skype
2.0.1 Mpi Edge of Skype:
3 Skype niile ngwaọrụ:
3.0.1 Skype ma online na offline oku
3.1 Kpọọ On Landlines & Mobile Phone Numbers na Skype:
3.2 Ihe ndị ọzọ si na saịtị m
Skype Nbanye Interface:
Tinye Ndi ana-akpo & mee Call
Maka agbakwunye kọntaktsị na Skype, ị ga-ahụ a panel nke na-egosi niile ndị ọrụ na-ama na iji Skype na-jikọrọ gị e-mail na akaụntụ. Ụzọ ọzọ bụ na ị nwere ike ozi ma ọ bụ e-mail onye ọ bụla a na-eji Skype na ike tinye ha Skype ID na-amalite na-akpọ onye ọ bụla ọzọ.
Ị nwere ike itinye ihe ọ bụla na kọntaktị site na-ahọpụta Tinye ndị mmadụ na isi menu nke Skype. I nwekwara ike ịgbakwunye achọrọ ọrụ nanị site na-ede ya Skype aha njirimara na mgbe ahụ na ịpị na tinye na kọntaktsị. Tụkwasị na nke a, ị nwekwara ike ime ka a na ndepụta gị kasị eji kọntaktị site na-agbakwụnye ha n'ime gị Add ka ọkacha mmasị si atụmatụ. I nwekwara ike na-egbochi ma ọ bụ wepu kọntaktị maka nzuzo gị na nche mbipụta.
Akụkụ nke Skype:
Skype site Microsoft na-eje ozi ya ahịa na pụrụ iche n'obi na-ekwu, sị Hi onye ọ bụla gburugburu ụwa.
The echiche n'azụ bụ ka ibelata n'ebe dị anya na-eme ka ọ nchegbu-free maka ndị mmadụ aka jikọrọ. Nke a bụ nnọọ uru anọ n'ọnụ gị na ezinụlọ gị na gị na otu mgbe i nwere ike n'ụzọ nkịtị kpọtụrụ ha.
Skype nwere nnukwu ndepụta afọ ndị ahịa. Na kwa ụbọchị, ọtụtụ nde ndị na-eji Skype ikori ma ọ bụ na-akpọ ndị ọzọ. Skype na àjà pụrụ iche atụmatụ tinyere.
High-Quality Video & Audio Oku:
Skype na-amamihe iji nye ike na elu-edu video na audio oku nsonaazụ ya ahịa. I nwere ike na-enwe kristal doro anya video na ọdịyo akpọ n'ụwa nile.
The akụkụ kasị mma bụ, Skype enye ya kacha mma na-arụpụta ma n'ihi na otu onye ka onye oku ma ọ bụ ìgwè oku. Ị ga-ahụ na ị na-eji a mma internet njikọ zere ihe ọ bụla interruptions gị video ma ọ bụ ọdịyo oku.
Screen Ịkekọrịta na Skype
Nke a bụ a nnọọ uru atụmatụ awa site Skype. Site n'enyemaka nke ihuenyo nkekọrịta, i nwere ike conveniently ịkọrọ gị n'ihu, foto, akwụkwọ ma ọ bụ ihe ọ bụla mgbe oku na-.
Nke a bụ oke uru maka ụlọọrụ ụwa. Ọrụ nwere ike ịkọrọ ha mkpa faịlụ ma ọ bụ akwụkwọ, show ngosi, oru ngo nkọwa, omume analysis, ahịa na-achọ ma na-ike idozi mbipụta n'oge ha oku.
Ọ bụrụ na ị chọrọ zoo gị chat ma ọ bụ na-akpọ maka ọ bụla nche ma ọ bụ onye ihe mere, mgbe i nwere ike ime nke a n'ụzọ dị mfe site Skype. Nke a na-eji ngwa na-enyere aka nwere a mkparitauka onwe na njedebe ọgwụgwụ ezo usoro.
Record your oku:
Skype-enye gị ohere idekọ gị video ma ọ bụ ọdịyo oku. Nke a bụ bara uru mgbe ị chọrọ ka ịdekọ ọ bụla dị oké ọnụ ahịa ozi ma ọ bụ oge. Ọ na-AIDS na mmụta na-arịba ama ala isi ihe ndị ị Agbaghara na mgbe gị na oku.
Nke a na atụmatụ na-arụ ọrụ maka ụlọọrụ ụwa, ma ọ bụrụ na ị chọrọ ige ntị gị nkụzi ma ọ bụ onye isi ụkpụrụ nduzi ọzọ, i nwere ike ime ya mfe site n'ikiri ndekọ nke oku gị.
Mpi Edge of Skype:
Skype e na-eje ozi ya ahịa n'ihi na ihe karịrị 10 afọ. Microsoft onye bụ a ibu na nke a asọmpi ahịa arụpụtara a video ekwentị na ngwa na-eje ozi ọzọ atụmatụ nke ndị ọzọ na asọmpi dị ka ihu oge, Google duo, etc. na-adịghị na-anapụta. Nke a bụ ihe mere na a na-eji ngwa bụ otu n'ime kasị eji ngwa ọdịnala n'ụwa nile. Ndị a ma ama asọmpi feature-agụnye
Skype niile ngwaọrụ:
Ọwọrọ, Skype e mere maka ihe android ọrụ gụnyere gam akporo mobile phones, gam akporo mbadamba, na ndị ọzọ na gam akporo ngwa ọdịnala. Ma na-akpali akụkụ bụ Skype nwekwara ike ga-eji na ndị ọzọ nile na ngwaahịa dị ka nke ọma gụnyere Microsoft Windows, Linux, Macintosh, Blackberry, na niile Apple mbadamba na smartphones. Ọ bụrụ na ị nwere ihe ọ bụla na ngwaọrụ na ị dị nnọọ nwere ibudata Skype na ndị pụrụ inweta otu n'ime ndị kasị mmekọrịta video telephony apps.
Skype ma online na offline oku
Ọzọ asọmpi mmewere nke a kacha Skype ngwa bụ na i nwere ike ọ bụghị nanị na-akpọ ndị na-online ma ike na-akpọ na-ejikọrọ na ndị mmadụ na-adịghị enwe ihe njikọ Ịntanetị. Skype proposing a adịchaghị na-enye ya ọrụ ka na-akpọ on mobile nọmba na Landline nọmba.
N'ihi na-ahụkarị online oku, ị na-adịghị akwụ ụgwọ ọ bụla. All ị chọrọ bụ gị njikọ Ịntanetị na-edebe a oku na-aga. Ma n'ihi na nke na-akpọ na nọmba ekwentị ma ọ bụ na Landline nọmba, Skype ebubo a nnọọ echekwa ndenye aha ya ọrụ. Ndị ọzọ a ma ama na uru nke Skype maka ya ọrụ na-
Ị nwere ike idowe na oku na gị na ezinụlọ gị, ọrụ ibe ma ọ bụ enyi n'ebe ọ bụla gburugburu ụwa. Skype na àjà nnọọ eri-irè ọkpụkpọ atụmatụ maka mba dị iche iche n'ụwa nile.
Ke adianade gam akporo ọrụ, atụmatụ ndị a na-na ọdabara ka ọ bụla na ngwaọrụ gụnyere desktọọpụ, iPhone, Xbox, OSX na ọtụtụ ndị ọzọ
Skype na-enye ohere ya ahịa ọtụtụ ụzọ na-akwụ ụgwọ maka na ndebanye aha gụnyere Visa, Master kaadị, jcb, PayPal, retail, Apple Na-App Ịzụ, American awara awara, Western Union na ọtụtụ ndị ọzọ
The usoro dị mfe. Ị dị nnọọ ga-akwụ ụgwọ maka na ndenye aha, na mgbe ahụ na ibudata Skype na ngwa ma malite akpọ na nke kacha mma video telephony software.
Kpọọ On Landlines & Mobile Phone Numbers na Skype:
Iji mee ka Skype-to-Landline oku na Skype na-eji gị android ekwentị ị ga-mkpa Skype n'aka.
Click on the Skype credit link ịgbakwunye Skype n'aka na akaụntụ gị.
Ọ bụrụ na ị na-adịghị Skype n'aka na ị na-agbalị ime ka a Skype-to-Landline oku, Skype will send you a pop-up to top-up your account.
Ị nwere ike ma na-a kwa ọnwa Skype na ndenye aha ma ọ bụ i nwere ike elu-elu eji otu-apụ ịkwụ ụgwọ.
Melite a kwa ọnwa na ndenye aha, ma ọ bụrụ na Skype na-eji maka gị kwa ụbọchị na mba oku. You will need a debit card for the subscription process.
Choose the amount of Skype credit you would like to add and pịa 'Gaa n'ihu'.
Pịa na efu igbe na-amalite na-ejuputa na ịgba ụgwọ gị nkọwa aha gị debit kaadị.
Ịzụta akwụmụgwọ gị na ị dị njikere iji Skype.
Ugbu a ị zụta ụfọdụ Skype n'aka i nwere ike na-amalite na-akpọ Landline nọmba ma ọ bụ mobile phones.
Iji malite, click on the phone icon dị ka e gosiri n'okpuru ke image.
Ịkpọ oku na ọnụ ọgụgụ na ị chọrọ ikwu okwu na-agbakwunye koodu nke nwoke mba na Pịa na Call Button.
Kpọgidere mgbe ị na-eme na gị oku.
Iji tinye a Landline nọmba Pịa na 'Tinye nọmba' then enter the landline number you wish to add to your list.
Na-enwe olileanya na ị rụnyere na Skype ngwa ọma. Ọ bụrụ na ị na-eche ihu nsogbu ọ bụla, dobe gị nke na ikwu igbe. Your gbara ajụjụ ga-edozi ozugbo o kwere omume. Soro niile nzọụkwụ edebe ndidi, you will surely be able to use Skype very easily.